Sarudzo yeakanakisa emanovhero
Mukadzi Wangu Wandinoda naSamantha Downing
Pazviitiko zvakawanda, vanotanga kunyengerwa munyaya dzinotyisa zvikuru, pamwe chete nevasingafungiri, ihama dzemhondi. Uye ngano dzakatarisira pane dzakasiyana zviitiko kutiita kuti tiwane iyo pfungwa yezvisingafungidzike. Kupinda zvakadzika, zvese zvinowanzouya kwatiri kubva pakuona ...
Purigatori, naJon Sistiaga
Zvingangodaro kuti rakaipisisa harisi hero uye kuti denga harina kunyanya kuipa. Kana usina chokwadi, Purigatori inogona kunge iine zvishoma zvese kune avo vasingazopedze kusarudza. Chinhu chezvishuvo zvisingagoneki kana kutya kwakanyanyisa; zvezvishuwo zvisina ganda...
3 akanakisa mabhuku naCamilla Läckberg
Iyo Nordic mhosva inoverengeka ine muCamilla Läckberg imwe yembiru dzayo dzakasimba kwazvo. Kutenda kuna Camilla uye vashoma vevamwe vanyori, uyu mutikitivha mhando akaveza chinzvimbo chakakodzera-chinzvimbo pasirese. Zvichava zvebasa rakanaka raCamilla nevamwe vakaita saiye ...
Mutambo Wekupedzisira, naJD Barker
Bhaibheri rakatozvitaura mumashoko aya "Qui amat periculum, in illo peribet". Chimwe chinhu chakadaro kuti wese anoda njodzi anopedzisira aparara mumaoko ake (shanduro yemahara kuburikidza). Asi kudonha kune kuti ini handizive kuti chii chinorwara. Kunyanya zvinoenderana nehunhu hupi kana zvinoenderana nezvipi ...
Mazuva Asara, naLorena Franco
Inokurudzira nzira yekusvika pakuverenga pasi. Temu yega yega ine kupera kwayo uye mafambiro ehupenyu anotinyudza mumvura ine madutu ezvakavanzika, zvechitendero kana kungoti kutya kwakakosha kunoratidza mazuva edu. Kurarama kuri kuedza kuenda kusingaonekwi nemukohwi akashata. Nekuti kufa...
Mutemo weMapere, naStefano de Bellis
Zvichava kumusoro kwaLuperca, iye mhando mhumhi-yakayamwa Romulus naRemus. Pfungwa ndeyekuti ngano isingadzoreki inokwana zvakakwana muchikamu chekuratidzwa kwehumambo hweRoma senge isingagoneki asi yakarongeka tsika, ine hunhu hwekupona uye kunyangwe kuenderera. Nekuti pakange pasina imwe budiriro ...
Kufungidzira, naRosa Blasco
Kubva kuna Cassandra uye nerima rake risingazivikanwe nemunhu, kutya ndiko kungori kungwarira kurwisa ramangwana rakaipa. Nyaya zhinji dzevakadzi dzakanyorwa dzakatenderedza pfungwa yeiyo intuition kana yechitanhatu pfungwa. Nekuti ivo ndivo avo munhoroondo vanonakidzwa nazvo ...
Nguva yaJohn Grisham yeKuregerera
Iyo nyika yeMississippi inochengetedza iyo yakaita nhema nhema yevakabudirira United States. Uye John Grisham anozviona kuti atarise mumakakatanwa akadzika pakati peanofungidzirwa kuva akasununguka mutsika dzekuMadokero nenzvimbo dzakapinduka dzakadai senyika yekumaodzanyemba ye ...